Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Chikomborero Chemari -> Mwari
Mwari: [Chikomborero Chemari]
1 Samueri 2:7
Tenzi ndiye anopa munhu urombo kana upfumi. Ndiye anodukupisa munhu kana kumukudziridza.
Chaunenge wagona kuita namaoko ako chiite nesimba rako rose nokuti kunzvimbo yavafi kwauri kuenda hakuna basa kana pfungwa kana ruzivo kana ungwaru.
Abhuramu akanga akapfuma kwazvo. Aiva nemombe nesirivha nendarama.
Vanhu vangu vaparara nokushaya ruzivo pamusana pokuti iwe wakaramba ruzivo, iniwo ndinokuramba kuti uve mupristi kwandiri. Pamusana pokukanganwa kwawakaita mutemo waMwari wako, iniwo pachangu ndichakanganwawo vana vako.
Asi kupfuura zvose, hama dzangu musapike nedenga kana nenyika kana nokupika kupi zvako. Regai hongu wenyu angova, hongu uye, kwete wenyu angova kwete kuti murege kupiwa mhosva.
Pavakanga vaguta akati vadzidzi vake vaunganidze zvimedu zvakasara kuitira kuti pashaye nechinoraswa.
nokuti panenge pane upfumi hwako ndipo pane mwoyo wakowo.
Kana pasina anotungamira, rudzi runoputsikira pasi kukurira kunobva mukunyatsoronga.
 Munhu anonyima anomhanyirira upfumi asi haazivi kuti achashaiwa Munhu anotsiura mumwe ndiye anotozoremekedzwa kupinda muzvambarara wokunyengedza norurimi rwake. Anobira baba kana amai vake achiti hakusi kukanganisa ishamwari yemharadzi. Munhu anemakaro anomutsa muchokoto asi anovimba naTenzi anopfumiswa. Munhu ane umbimbindoga ibenzi; anoita zvinhu noungwaru anonunurwa. Munhu anopa kuvarombo hapana chaanozoshaya asi asingavacheuki anova nejambwa guru.
Kupinda kwaMwari Mambo muTemberi Nyika ndeyaTENZI nazvose zviri mairi, pasi pose zvapo navanhu vanogarapo ndezvake
“Zvichakuwanai imi nyanzvi dzomutemo nemi vaFarisei imi, vanyengedzi, nokuti munobvisa chegumi chetunhu tunonhuwirira tudikidiki twemindi nedhiri nekamini asi muchisiya zvinhu zvikuru zvomutemo, nezvoruenzaniso nezvetsitsi nechitendero. Izvi ndizvo zvamaifanira kuita musingaregi zvenyu zvimwe izvozvo.
Usave nechikwereti nomunhu kusiya chokudanana nokuti munhu anoda mumwe wake azadzisa mutemo.
 TENZI muchengeti wavanhu Ndinosimudzira meso angu kumakomo. Kunobva rubatsiro rwangu ndokupi? Rubatsiro rwangu runobva kuna TENZI akasika denga napasi.
 Jesu ndokuvapindura achiti, “Ivai nechitendero muna Mwari. Zvirokwazvo ndinokuudzai kuti, ‘Ani naani anoti kugomo iri simudzwa ukandwe mugungwa,’ asingakahadziki mumwoyo make asi achitenda kuti zvinhu zvaareva zvichaitika, achazviitirwa.
 Mwari akati, “Ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu. Ngavave noutongi hwenyika yose nohwehove dzomugungwa neshiri dzedenga nezvipfuwo nezvinokambaira nokuzvova napasi.” Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi.
2 VaKorinte 9:6-8
 Chiripo ndechokuti munhu anodyara zvishoma achakohwawo zvishoma; anodyarawo zvakawanda achakohwawo zvakawanda. Mumwe nomumwe anofanira kuita sokuzvisarudzira kwaakaita mumwoyo make, kwete seasingadi kana seanomanikidzwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara. Mwari anogona kukupai makomborero ose akawanda kwazvo kuti nguva dzose muve nezvinokwana muchikwanisawo kuwana zvinhu zvinodiwa pamabasa ose akanaka.
 Ndiani wenyu anenge achida kuvaka shongwe asingatangi agara pasi achiverenga mari yaingadye kuti ane inokwana kuipedza here? Zvingaitike kuti iye achera ugaro hwayo wotadza kuipedza. Vose vanoiona vanotanga kumuseka vachiti, ‘Murume uyu akatangisa kuvaka asi akatadza kupedza.’
 Kana muchikweretesa vamunofunga kuti vanozokudzorerai munokodzera chitusoi? Kana vatadzi vanokweretesa vamwe vatadzi kuti vagodzorerwa zvakaenzana. Asi imi idai vavengi venyu, muvaitire zvakanaka, mukweretese musingatarisire kuti muchadzorerwa, ipapo mubayiro wenyu uchazova mukuru uye muchazova vana voWokumusorosoro nokuti iye ano mwoyochena kuna vasingatendi nokuna vakaipa. Ivai netsitsi saBaba venyu vane tsitsi.
 Zvino imi vapfumi chemai muridze mhere nokuda kwenhamo dzichakuwirai. Upfumi hwenyu huri kuora uye hanzu dzenyu dziri kudyiwa nezviundudzi. Ndarama yenyu neSirivha zviri kuita ngura. Ngura yazvo ndiyo ichakuwanisai mhosva. Ichakudyai nyama yenyu somoto. Makazviunganidzira upfumi kuitira mazuva okupedzisira.
 Tenzi akataurira Abhuramu kuti, “Chibva munyika mako, ubve mukati mehama dzako, usiye musha wababa vako utamire kunyika yandichakuratidza. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakukomborera. Ndichaita kuti zita rako rikurumbire, iwe uchiva chikomborero. Ndichakomborera vanokumborera. Vanoti uwirwe norushambwa, ndichivapinza murushambwa. Ndudzi dzose dzichakomborerwa pamusana pako.” Saizvozvo Abhuramu akasimuka akaenda sokuudzwa kwaakaitwa naTenzi. Roti akaendawo naye. Abhuramu akanga ava namakumi manomwe amakore ana makore mashanu paakatama kuHarani. Abhuramu akatora mudzimai wake Sarai naRoti mwanakomana womunun'una wake, noupfumi hwake hwose hwaakanga awana navaranda vaakanga awana muHarani. Akasimuka achienda kuKanani. Kuzoti asvika kuKanani, Abhuramu akafamba nomunyika imomo akasvikogara kuShikemu pamuti womuoki. Panguva iyoyo vaKanani vakanga vagere munyika iyoyi. Tenzi akazozviratidza kuna Abhuramu akati, “Ndichapa nyika ino kuzvizvarwa zvako.” Naizvozvo akavakira atari Tenzi akanga azviratidza kwaari. Akabva ipapo akaenda kugomo riri kumabvazuva kweBhetieri. Akadzika matendhe ake panoti Bhetieri kumavirira, guta reAi nechokumabvazuva. Akavakira Tenzi atari ipapo, akanamata Tenzi. Abhuramu akaramba achienda nechokuNegevhu. Munyika iyoyo makaita nzara, shangwa chaiyo yenzara. Saka Abhuramu akaenda Ijipiti kumbondogarako. Kuzoti ava kusvika Ijipiti, Abhuramu akafanotaurira mudzimai wake Sarai achiti, “Iwe uri mukadzi akanaka kwazvo. Naizvozvo kana vaIjipiti vakakuona vachati, ‘Uyu mukadzi wake uyu,’ vakandiuraya, iwe vachikurega uri mupenyu. Chitoti zvako iwe uri hanzvadzi yangu ndiko kuti vatondiitira zvakanaka pamusana pako ndirege kuurayiwa.” Abhuramu paakasvika kuIjipiti, vaIjipiti vakaona kuti mukadzi wacho akanga akanaka kwazvo. Kuzoti machinda aFarao amuona akamurumbidza pana Farao. Mukadzi uya ndokubva atorwa akaendwa naye kumba kwaFarao. Pamusana paSarai, Farao akabata Abhuramu zvakanaka kwazvo, akava nehwai nemombe, namadhongi makono namakadzi navaranda vechirume nevechikadzi nengamera. Asi Tenzi akaunzira Farao navanhu veimba yake matambudziko makuru kwazvo pamusana paSarai mudzimai waAbhuramu. Farao akadaidza Abhuramu akati, “Chiiko ichi chawaita kwandiri.” Wakaregerereiko kundiudza kuti mukadzi uyu mudzimai wako? Seiko wakati, “Ihanzvadzi yangu, ndosaka ndakamutora kuti ave mukadzi wangu. Aiwa! Hoyu mudzimai wako. Chimutora ubve pano uende.” Farao akatuma vamwe vanhu vake kuti vaburitse Abhuramu nomudzimai wake munyika iyoyo, nezvinhu zvose zvavaiva nazvo vachimuperekedza.
 “Ngwarirai kuti murege kuita zvokushamisira pamberi pavanhu kuti vakuonei mukuita kwenyu kwakarurama. Nokuti mukadaro hamuzowana mubayiro unobva kuna Baba venyu vari kudenga. “Nezvo kana mopa zvipo musaridze hwamanda sezvinoita vanyengedzi mumasinagogu; nomumigwagwa kuti varumbidzwe navanhu. Zvechokwadi chaizvo, ndinoti kwamuri, vakatowana mubayiro wavo kare. Asi kana mopa zvipo, ruoko rwenyu rworuboshe ngarurege kuziva zviri kuitwa norudyi kuti kupa kwenyu zvipo kuve kwomuchivande, kuti Baba venyu vanoona muchivande vagokupai mubayiro. “Kana mava kunamata regai kuita savanyengedzi. Vanoda kumira vachinamata mumasinagogu napamharadzano dzenzira vachiitira kuti vaonekwe navanhu. Chokwadi — chokwadi ndinoti kwamuri vakatowana mubayiro wavo kare. Asi kana iwe wava kunamata, pinda mumba mako uzarire gonhi rako unamate kuna Baba vako vari muchivande. Ivo Baba vako vanoona zviri muchivande, vachakupa mubayiro. “Asi imi kana mava kunamata regai kuzavaza sezvinoita vechirudzi nokuti vanofunga kuti vanonzwika nokuda kokuwanda kwamazwi avo. Musafanane navo, nokuti Baba venyu vanoziva zvamunoda musati mavakumbira. Nezvo namatai sezvizvi muchiti: ‘Baba vedu muri kudenga zita renyu ngariereswe. Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga. Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva nezuva. Tiregerereiwo zvitadzo zvedu, sokuregerera kwatinoita vanotitadzira Musatirege tichipinda muchiedzo. Asi tinunureiwo kune zvakaipa. ’ Nokuti umambo ndowenyu, nesimba nembiri, narini narini. Ameni. “Kana mukaregerera vanhu zvikanganiso zvavo, Baba venyu vokudenga vanokuregereraiwo zvikanganiso zvenyu. Kana musingaregereri vanhu zvikanganiso zvavo, Baba venyuwo havakuregererei zvikanganiso zvenyu. “Kana motsanya musasuruvarise uso sezvinoita vanyengedzi nokuti vanounyanisa kumeso kuti vaonekwe navanhu kuti vari kutsanya. Chokwadi chaizvo ndinoti kwamuri vatogamuchira mubayiro wavo. “Asi kana imi motsanya, zorai musoro mafuta, mushambe uso hwenyu; kuti kutsanya kwenyu kurege kuonekwa navanhu; asi kuti kuonekwe naBaba venyu vari muchivande. Ivo Baba venyu vanoona muchivande vachakupai mubayiro. “Regai kuzviunganidzira upfumi panyika. Pahunodyiwa nezvipfukuto nengura nehonye, panozopazwa nembavha dzichiba. Asi zviunganidzirei upfumi kudenga, kusina chipfukuto kana ngura inohudya, kusingapazwi nembavha dzichiba, nokuti pano upfumi hwako ndipo pano mwoyo wakowo. “Ziso ndiro mwenje womuviri. Nezvo kana ziso rako rakanaka muviri wako wose uchazara nechiedza. Asi kana ziso rako risina kunaka muviri wako wose uchazara nerima. Zvino kana chiedza chiri mamuri chava rima, rima racho richava rakakura sei! “Hapana munhu angashandire vatenzi vaviri, nokuti anogona kuvenga mumwe achida mumwe, kana kuti anoti kwati kwati nomumwe achizvidza mumwe. Haugoni kuva muranda waMwari nomuranda wemari. “Vimba naMwari kuti anokupa zvinokuraramisa. Nezvo ndinoti kwamuri musazvidye mwoyo nezvoupenyu hwenyu kuti muchadyei kana kuti muchanwei kana nezvomuviri wenyu kuti muchapfekei. Ihwo upenyu hausi hwakakosha here kupinda chokudya, uye muviri haupfuuri chokupfeka here? “Tarisai muone shiri dzedenga hadzidyari kana kukohwa kana kuunganidza mumatura asi Baba venyu vokudenga vanodzipa chokudya. Hamuna kukosha here kupinda idzo? Ndiani wenyu angarebese upenyu hwake nechidimbu pamusana pokuzvidya mwoyo? Ko munozvinetsereiko muchifunga nezvokupfeka? Tarisai muone maruva esango kuti anokura sei. Haabati basa kana kuruka. Asi ndinoti kwamuri kunyange Soromoni pachake nembiri yake yose iya, akanga asina kushongedzwa serimwe raiwaya. Kana Mwari achishongedza uswa homusango huripo nhasi uno, mangwana hwokandwa muchoto, haasi anokupfekedzai zvakatonyanya here imi vanhu vochitendero chiduku. Saka musazvidye mwoyo muchiti tichadyei kana kuti tichanwei kana kuti tichapfekei. Nokuti vechirudzi vanotsvaka zvose izvi asi Baba venyu vokudenga vanoziva kuti zvose izvi munozvida. Imi, kutangira zvose tsvakai umambo hwake; noururami hwake, zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu. “Nezvo musazvidye mwoyo nezvamangwana nokuti mangwana achazvionera oga, zuva roga roga rine nhamo dzaro dzakarikwanira.”
 “Kana mukateerera zvinorehwa naTenzi Mwari wenyu mukanyatsochengeta mirao yose yandiri kukuudza nhasi uno, Tenzi Mwari wako achakusimudzirai pamusoro kupfuura ndudzi dzose dzavanhu dzapasi pano. Kana ukateerera zvinorehwa naTenzi Mwari wako, makomborero ose aya achauya kwauri achiita zvokunaya pauri. “Muchakomborerwa mumaguta menyu nomumaruwa menyu. “Muchakomborerwa nokupiwa vana vakawanda, nembesa zhinji muminda yenyu, nemhuka dzakawanda. Zvipfuwo zvako zvichaita matanga namatanga, vana vezvimwe zvipfuwo zvako vachiita gumi nefararira. “Muchakomborerwa zvokuti matengu enyu achagara akati pamu pamu kuzara, mutsero dzenyu hamuzomboshayikwa chirimo. “Muchakomborerwa mune zvose zvamuchaita. “Tenzi achaita kuti vavengi venyu vanenge vakumukirai vakurirwe. Vachakuvingai vakatungamidzana, asi muchavaitisa chimwandamwanda. “Tenzi achakomborera basa rako. Achazadza matura ako. Achakukomborera munyika yauri kupiwa naTenzi Mwari wako. “Tenzi achakuitai rudzi rwavanhu vake pachake vatsvene maererano nemhiko yaakakuitirai, ndokungewo machengeta mirao yaTenzi Mwari wenyu nokufamba munzira dzake. Naizvozvo ndudzi dzose dzavanhu vapasi pano vachaona kuti munodaidzwa nezita raTenzi. Vachakutyai. Tenzi achakupfumisa achikupa vana vakawanda, nezvipfuwo zvizhinji nembesa zhinji, munyika yakatsidzirwa madzibaba ako naTenzi kuzokupa. Tenzi achakuzarurira matura oupfumi hwake hwakanaka hwokumatenga achikunayisira mvura mumunda mako nenguva yayo chaiyo nokukomborera basa rose raunobata. Uchakweretesa ndudzi zhinji dzavanhu, asi iwe usina chaunokwereta kwavari. Tenzi achakuitai musoro, kwete muswe. Ucharamba uchibudirira chete, usingakundikane, ndokunge wateerera mirao yaTenzi Mwari wako yandiri kukupa nhasi uno wanyatsoichengetawo. Regawo kutsautsira pane murao upi noupi zvawo pamirao yandiri kukuudza nhasi, woita zvomusoro wako wotevedza vamwe vamwari uchivashandira. “Asi kana mukarega kuzoteerera zvataurwa naTenzi Mwari wenyu, kana kuchengeta mitemo nemirao yandiri kukupai nhasi uno, rushambwa irworwu rwose ruchakutibikirai. “Muchawirwa norushambwa mumaguta enyu nomumaruwa enyu. “Muchawirwa norushambwa rwokushaya kana chokuisa mumatengu enyu kana mutsero dzenyu. “Muchava norushambwa rwokusava navana vakawanda, norwokuva nezvokukohwa zvishomashoma, uye mombe nezvimwe zvipfuwo zvenyu zvichange zviri zvishomanana. “Muchava nekashambwa kwokuti zvose zvamunoita hazvibudirire. “Tenzi achakupai rushambwa, achakuonesai ndondo achakutsiudzai pane zvose zvamuchaita kudzamara maparadzwa matsakatika pasina nenguva yose zvakonzerwa nezviito zvenyu zvakaipa zvamunenge maita muchindiramba. Tenzi achakutumirai denda richakurakatisai kusvikira mose mapera kuti dhu munyika yamuri kundotora kuti ive yenyu. Tenzi achakurovai nedenda rechikosoro chorurindi neromuviri unopinda chando, namaronda anonyeka, nokupisa muviri nenhamo yokushaya mvura zvokuti mbesa dzenyu dzichaita zvikukuve dzichiita chakuvhuvhu nezuva. Zvichakunonoresai kudzamara mapera kuti nho-o. Denga richaramba kunaya serakadzivirirwa nendarira. Pasi paunotsika pachaomarara sesimbi. Panze pokuti Tenzi anayise mvura, jecha neguruva ndizvo zvichanaya. Zvichabva kudenga zvichikunaya kusvikira waparara. “Tenzi achaita kuti mukundwe navavengi venyu. Muchavavinga nenzira imwechete makatungamidzana asi munozodzokako rava bararamhanya kuvatiza. Ndudzi dzose dzavanhu vapasi pano dzichadedereswa nazvo. Zvitunha zvenyu zvichadyiwa neshiri dzedenga nezvikara zvesango pasina anozvidzinga. Tenzi achaita kuti uve nedenda ramamota aye okuIjipiti, muviri uchiva namaronda maronda nemhezi, muviri wose uchingova negwenyukwenyu risingarapike. Tenzi achakupa chirwere chokupenga nechoupofu nechokuzungaira. Sebofu rinofamba richiita zvokutsvanzvadzira murima, uchaita kufamba kwokutsvanzvadzira masikati machena. Hauzombobudiriri pane zvaunoita. Vanokukurira vachazogara vachikubata zvakaipa nokukupambira zvinhu zvako pasina anokununura. “Uchangoti roorei mukadzi wako, gombarume robva rarara zvaro naye. Uchavaka imba asi hauzogaramo. Ucharima munda wamagirepisi, asi haumboruma kana girepisi rayo. Mombe yako ichaurayiwa wakatarisa, asi nyama yacho haumboiisa kumuromo. Dhongi rako richapambwa mumaziso mako, usingazoridzoserwi. Hwai dzako dzichaiswa mumaoko mavavengi vako pasina anokununudzira. “Vana vako vakomana navasikana vachatapwa navanhu veimwe ndudzi, uchavatsvokorera meso zuva nezuva uchivatarisira kuti vachadzoka pasina chaunokwanisa kuita. Rudzi rwavanhu vausingazivi zvako, ndirwo ruchadya mbesa dzawakadikitira kurima. Vacharamba vachikutonga nechisimba chete zvokuti nhamo yauchaona nameso ako ichakupengesa. Tenzi achakupa rushambwa rwokuve namazironda pamabvi napamakumbo ako. Maronda acho enhuta asingarapiki anobvira pasi petsoka yako kusvikira panhongonya yomusoro wako. “Tenzi achaita kuti imi namambo wenyu wamunenge magadza kukutongai mutapwe norudzi rwavanhu vasingazikanwi nemi kana namadzibaba enyu. Ikoko muchandonamata vamwari vezvimiti navamabwe. Marudzi ekwauchange waendeswa achakatyamadzwa nazvo zvokuti uchava chinhu chinokatyamadza, chiseko zvacho netsumo yavo. “Uchadyara mbeu dzakawanda mumunda, asi zvokukohwa zvichava zvishomanana nokuti zvichapera kudyiwa nehwiza. Uchasima minda yamagirepisi ugobindikita kuichengetedza, asi hapana chaunotanhamo, kana kumbonwawo waini yomo nokuti zvose zvichapera kudyiwa namakonye. Uchava nemiti yemiorivhi munyika yako yose, asi hapana kana futa rayo rauchazora nokuti maorivhi acho achakurumuka. Uchabereka vana vakomana navasikana, asi hauzogari navo nokuti vachatapwa. Miti nemichero yomunyika mako ichava yehwiza. “Mutorwa wauchange ugere naye acharamba achingokwirira chete pamusoro pako iwe uchingoderera. Iye ndiye achatokukweretesa, asi iwe usingakwanise kumukweretesawo. Iye ndiye achava musoro, iwe uriwe muswe. “Rushambwa rwenhamo dzose idzi ruchakuwira rwugoramba rwakangoti nama nama newe kudzamara wakwana narwo rwakuparadza nokuti unenge usina kuteerera zvakarehwa naTenzi Mwari wako, usina kuchengeta mitemo nemirao yake yaakakuudza. Izvozvi izvi zvichava chiratidzo nezvinhu zvichakushamisa iwe navana vako. Pamusana pokuti unenge usina kushandira Tenzi Mwari wako norufaro nomwoyo wakasununguka panguva yaunenge uchakapfuma, nokudaro uchashandira vavengi vako, vachakuvinga vatumwa naTenzi iwe uine nzara nenyota, usina zvokupfeka zvakakwana, zvinhu zvose zvichingova zvenhamonhamo kwauri vachizokuisa joko resimbi pamutsipa wako kudzamara vakuparadza. Tenzi achatuma rudzi rwavanhu vanobva kure, pasi kwenyika; uchaerekana wavhungwa sezvinoita gondo rodo kubata huku. Vachange vari rudzi rwavanhu vane mutauro wamusinganzwi, rudzi rune zviso zvinodederesa rusina zviya zvokunyara vakura kana kunzwira vana vaduku tsitsi. Vachadya mhuru dzezvipfuwo zvako, nembesa dzomumunda wako kusvikira vakurozva. Havambokusiyiri kana tsanga yembesanwa zvayo kana kukusiyira waini kana mafuta eorivhi, kana mwana zvake wezvimwe zvipfuwo zvako, kana kachipfuwo kako zvako kudzamara vakutsakatisa. Vachakukombai mumaguta enyu kudzamara nhungamakore dzetsvingo dzawo dzamunovimba nadzo dzakoromoka munyika yenyu yose. Vachakomba maguta enyu ose omunyika yenyu yose yamuri kupiwa naTenzi Mwari wenyu. “Pamunenge makakombwa kudaro, matambudzwa navavengi venyu, muchasvika pakutodya vana venyu vokubereka, nyama yavana venyu chaivo vakomana navasikana vamunenge mapiwa naTenzi Mwari wenyu, munhamo iyoyo yokukombwa kwamaguta enyu navavengi venyu. Kunyange murume ane mwoyo munyoro wokuziva hama, haazonzwira tsitsi mukoma kana munun'una wake kunyange mudzimai wake, chido chomwoyo wake, kana vana vake vanenge vachiripo zvokuti anotovanyima nyama yavana vake vaanenge achidya nokuti anenge asisina chokubata munhamo iyoyo yokukombwa mumaguta enyu navavengi venyu. Kanawo mukadzi ane mwoyo munyoro wokuziva hama, anenge akapfuma zvokuti haasati ambofunga mumwoyo make kuti rutsoka rwake ruchatsika pasi, haazonzwira tsitsi murume wake, chido chemwoyo wake, kana mwana wake mukomana kana musikana. Achangobva mukusununguka, achadya muchivande mwana wake mucheche pamwechete nechavakuru chake pamusana pokuti panenge pasisina chokubata munhamo iyoyo yokukombwa kwemaguta enyu navavengi venyu. “Kana ukarega zvako kunyatsoteerera nokuchengeta zvose zvinorehwa nomutemo uyu zvakanyorwa mubhuku rino, uchitorega zvako kutya zita iri rokuti Tenzi Mwari wako rine mukurumbira rinoremekedzwa, Tenzi achaita kuti matambudziko ako akure ave ndambirira chaiyo. Achakurwarisa, iwe navana vako namatenda asingapere nezvirwere zvinosiririsa zvisina mugumo. Achaunzawo pauri zvirwere zvose zviya zvawaitya zvokuIjipiti zvicharamba zvakati pauri momote. Tenzi achauyisa pauri zvirwere nenhamo dzose dzisina kunyorwa mubhuku romutemo irori kusvikira maparadzwa. Muchasara mava vanhu vashomanana asi imi maimbova senyenyedzi kuwanda nokuti munenge musina kuteerera zvinorehwa naTenzi Mwari wenyu. Sokufara kwakaita Tenzi kukupfumisai nokuita kuti muwande, Tenzi achafarirawo kukuparadzai achikupedzai achikutipurai kubva munyika yamuri kupiwa naTenzi Mwari wenyu kuti ive yenyu. “Tenzi achakumwararisai mukati memarudzi avanhu kubvira kwakaperera nyika kusvika kwainoperera, ikoko muchandonamata vamwari vasingambozikanwi nemi kana namadzibaba vezvimiti navamabwe. Uri mukati memarudzi evanhu ivavo haumbogadzana mwoyo, unenge usinawo paungati apa ndopahoko yangu. Tenzi achakupa mwoyo wokungova zimbwende romunhu. Ucharasa mwoyo pakutarisira kwako uchigara wakasuruvara. Uchagara wakabatira upenyu hwako mumaoko, uchitya kuti zvimwe haridoke uri mupenyu, kana kuti hakuedze uchafema. Pako uchapashaya, mangwanani mwoyo wako unenge wongoti dai kwachidoka zvako, kana kwazodoka wochemera kuti dai zuva rachibuda zvaro. Izvozvo unenge wava nebapu mumwoyo mako rokutya chose chose chawaona. Kunyange ndakambotaura kuti hamuchazoita rwendo irworwo zvakare, Tenzi achakudzosera kuIjipiti nengarava. Muchandozvishambadza mose varume navakadzi kuti mutengwe navavengi venyu savaranda, asi muchashaya neangadewo kukutengai.”